Sidee Ayuu Ku Geeriyooday Macallin Maxamed Mooge Liibaan? | Berberatoday.com
32 Sano, ayaa laga joogaa Bishii June 1984-kii xilligaas oo Geesigii Maxamed Mooge Liibaan iyo 16 dagaalyahanaddii SNM wehelisay ay ku nafwaayeen Jid goyn cadowgii u galay Meesha la yidhaa Meer meerta oo u dhaxaysa Awaare iyo Dhagax Buur.
—Raga kale waxaa wehelisay gabadh Faadumo la odhan jiray oo iyaduna la socotay, halkaas ayaa Ambush jidgoyn loogu galay waxaana u galay dadkii halganka dhabarka kala dagaalamay. Dadka dilay oo ka koobnaa oday iyo wiilal uu dhalay iyo qaraabadiisa waxay daba socdeen aanooyin la buunbuuniyey oo cadowgii ka faa’iidaystay.
Halkaas dagaal balaadhanbaa ka bilaabmay oo dhex maray Beeshii uu Maxamed Mooge ka dhashay iyo Beeshii Nimankii jid goynta galay , dagaalkaasi wuxuu bilaabmay Bishii June 1984 wuxuu dhamaaday dabayaaqaddii 1986-kii. Dad badan baa dagaalkaas naftooda ku waayay’’.
’Tababarka Macalinimo wuxuu ku qaatay dugsigii Camuud , Macalinimadiisu wuxuu ka bilaabay dugsiga Xaafada New Hargeysa, degmada Oodweyne ayuu ka shaqeeyay , isagoo Macalin ah ayuu Marxuum Maxamed Mooge Fanka Bilaabay’’.
Xigasho: Aswad Baarcad